Mayelana NATHI - Shandong Kunda Steel Co., Ltd.
Singama-ejensi amafemu we-Steel adumile e-China.Singaba 100% ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yezimpahla zethu.
Okwesibili: Sinesikhungo sethu sokucubungula, esinganikeza insizakalo eyenziwe ngezifiso njengokugoba, ukushisela, ukupholisha, ukwelashwa kokugqwala, okuhlanganisiwe.
Okwesithathu, Sinezinto ezingaphezu kuka-2000tons esitokweni, Lokho kusho ukuthi isikhathi sokulethwa izinsuku eziyi-3-5 kuphela.
Ekugcineni, Inkampani yethu eyasungulwa ngo-2010, ngakho-ke sineminyaka eyishumi nesipiliyoni embonini yensimbi. Akungabazeki ukuthi singakunikeza insizakalo yobuchwepheshe kuwe.
IShandong Kunda Steel Co., Ltd. Kutholwe edolobheni laseLiaocheng, esifundazweni saseShandong, okuyidolobha elihle kakhulu elithweswe umqhele njenge-ental Oriental Venice ＂. ILiaocheng entshonalanga nesifundazwe saseShandong, 200Km South kusuka eBeijing City, 100Km entshonalanga ukusuka eJinan City. IJiqing Expressway inqamula idolobha lisuka eMpumalanga liya eNtshonalanga; iBeijing-Kowloon Railway isebenza yize inyakatho iye eningizimu, izuza esimweni esikahle sezimoto, umnotho waseLiaocheng uyathuthuka ngokushesha futhi yakha isikhungo sezinsimbi esikhulu kunazo zonke eNyakatho neChina.
IShandong Kunda Steel Co., Ltd. eyasungulwa ngo-2006, ukukhiqiza ipayipi Seamless futhi abandayo draw ipayipi.
Ngo-2010 inkampani yaseLaiwu Steel ebhalisiwe futhi esungulwe iLiaocheng Sales Branch, ebandakanyeka ekuthengiseni i-Wear Resistant Steel Plate.
Inkampani yakwaKunda Steel ivume ukusungulwa yi-Industrial and Commercial Bureau ngo-2014, ebandakanyeka ekwenzeni ibhizinisi lesitoko, kufaka phakathi umkhiqizo wensimbi ongagqwali nocarbon, ipuleti lensimbi, ipayipi nebha eyindilinga.
Ngo-2016 wasungula ithimba lebhizinisi lomhlaba wonke. 6 insizakalo yomuntu kumakhasimende angaphandle.
Ngo-2016, esungulwe insimbi engagqwali ashiselwe ipayipi ifektri, ukukhiqiza round, unxande futhi isikwele ipayipi.
Ngo-2017, yasungula ifektri ehamba phambili, ukukhiqiza okuyinhloko ishidi lokuhola, umnyango wokuhola, ingilazi yokuhola, i-apron yokuhola njalonjalo.
Ngo-2018, wasungula imboni sishaye, ukuthenga ukuqhumisa entsha futhi Umdwebo umshini ipayipi, ipuleti nokunye.
Ngo-2019, i-workshop ye-CNC yasungulwa, thenga umshini omusha wokusika i-fiber, umshini wokugoba, umshini we-drill, umshini we-saw.
Ngo-2020, iqembu lebhizinisi lamazwe omhlaba liba yiqembu ezimbili ezi-3.
Manje Shandong Kunda Steel Co., Ltd. inganikezela nge-ONE STOP SERVICE, kusuka kokugaywayo okukhiqizayo ukuqeda umkhiqizo, kufaka phakathi i-Plate steel stainless plate / i-Weathering Steel Plate / Amandla aphezulu we-Carbon Steel Plate / Insimbi Engagqwali / I-Aluminium / I-Brass / ipuleti / ibha eyindilinga / ibha ye-engeli / ibha eyisicaba / iphrofayili Konke lokhu kunesitoko sosayizi ojwayelekile, amapuleti amathani ayi-2000, amapayipi ayizinkulungwane eziyi-1000 njalonjalo.
Ngomqondo we-＂Qhubeka Uthuthuka, Ukubambisana kwe-Win-win＂, futhi kwenziwa ngekhwalithi ethembekile nangemva kohlelo lwensizakalo yokuthengisa, uKunda wazuza idumela elihle kumakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe.Siyakwamukela ngobuqotho ukuthi uze enkampanini yethu uxoxisane ngebhizinisi futhi wenze impumelelo enkulu ndawonye !